Intelligent Relay Test Set၊ အကာအကွယ် Relay Test Set၊ စီတီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ - Kingsine
အသိဉာဏ် Relay စမ်းသပ်မှုသတ်မှတ်မည်
Protection Relay စမ်းသပ်ခြင်း
မှန် CT Analyzer
Universal Relay စမ်းသပ်မှုနောက်ခံ ...
K3063i Universal Relay စမ်းသပ်မှု ...
ထူးခြားချက်များ: ● Analog နှင့်အတူ ...
KF86 အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ relay စမ်းသပ်မှု ...
အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ● Uni ...
K3163i Universal Relay စမ်းသပ်မှု ...
Kingsine ၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ ရေနံဓာတု၊ ရထားလမ်းတူးဖော်ရေးနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မီတာနှင့်အကာအကွယ် relay စက်ရုံများစွာ၌အတည်ပြုပြီး၊ ယူအက်စ်အေ၏ IEE PES T＆D ညီလာခံ၊ အမေရိကန်မှ POWER-GEN အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒူဘိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းလျှပ်စစ်၊ ဂျာမနီ HANNOVER MESSE နှင့်ဘရာဇီးမှ FIEE လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြပွဲ။ ယင်း၏ Relay-Tester သည်ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး relay protection devices များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်သင့်တော်သည်ABB, SIEMENS, ALSTOM, TOSHIBA, SCHNEIDER, AREVA, SEL, GE စသည်တို့နှင့် Kingsine သည်ဥရောပ၊ အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိမိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှသူ၏ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ရက်နှင့်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ collection များကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ
အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ● KF932 ...
KF932 IEC61850 ထပ်ဆင့်လွှင့်သူ
ဖော်ပြချက်●အတည်ပြုချက် ၉.၇ ...
KT210 မှန် CT / PT Analyzer
ဖော်ပြချက်● ၇ လိုင်းများ ...
KF900A ခရီးဆောင်အသိဥာဏ် IEC61850 ...
● Universal Relay Test လျှောက်ထားခြင်း ...
K2063i Universal Relay Test Set
KS833 အဆင့်သုံး AC / DC / Harmonic Stan ...
KINGSINE ELECTRIC AUTOMATION Co. , Ltd မှ KINGSINE သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင် China State Grid ကော်ပိုရေးရှင်း (SGCC) မှကျင်းပသော INSTRUMENTATION Tender (Ref ။ No. 0711-190TL10032020 / 190LT14232020) အားလေလံဆွဲခြင်းအားအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်ကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည်။ လေလံတွင် KF9 စီးရီး ၁၀၅ ခုပါဝင်သည်။
KF932 KF86 Relay Tester သည်အမျိုးသားဆွေမျိုးစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်
၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်， KINGSINE ၏ KF932 လက်ကိုင်သစ် IEC61850-Tester & KF86 Digital-Analog All-in-1 Protection Relay စမ်းသပ်သူသည်အမျိုးသားစွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှုဖြန့်ဖြူးခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုစက်ကိရိယာအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေးစစ်ဆေးရေးစင်တာနှင့်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ပါသည်။ ..
KF86 သင်တန်းကို Gansu ပြည်နယ်တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့သည်
201CC တွင် SGCC ၏အကြီးမားဆုံးကာကွယ်ရေး relay ကိုစမ်းသပ်သူအဖြစ် Kanzine သည် Lanzhou မြို့ရှိ Gansu Electric Power Training Center (China Grid Corporation) ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်သင်တန်းညီလာခံသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးအဓိကအားသမားရိုးကျ substatio အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည် ...
KF86 သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ STATE GRID ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရေပန်းစားမှုကိုထပ်မံသက်သေပြခဲ့သည်
KINGSINE ELECTRIC သည်တရုတ်နိုင်ငံ STATE GRID ကော်ပိုရေးရှင်းရှိ BEIJING မြူနီစီပယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီမှကျင်းပသည့်ပထမဆုံး e-commerce လေလံခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်း၏ပထမအသုတ်ထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်းအတွဲ (၁) ခုအား KINGSINE ELECTRIC အနိုင်ရကြောင်းကြေငြာသည်။ ဒါဟာခြောက်အဆင့် Universal Re ၏တဆယ်နှစ်ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ် ...
coronavirus ဖြစ်ပွားပြီးနောက် KINGSINE သည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အလုပ်ပြန်လည်စတင်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အလုပ်နှင့်ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်လည်စတင်သည်။ KINGSINE သည်ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအရလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ ။ ...
Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap,
Relay စမ်းသပ်မှု, အသိဉာဏ် Relay ကိုစမ်းသပ်, Protection Relay စမ်းသပ်သူ, အကွာအဝေးကာကွယ်ရေး Relay စမ်းသပ်သူ, Differential Relay စမ်းသပ်သူ, ဒီဂျစ်တယ် relay စမ်းသပ်မှု, ထုတ်ကုန်အားလုံး